Ny tontolon' IkalaFanja: janvier 2015
Miarahaba tratry ny taona vaovao 2015 antsika MALAGASY rehetra ny tenako, vao avy nankalaza tsy ela akory izay ny taom-baovao Malagasy koa isika ka asa na mba hitanareo amin'izany fa mba firenana manana ny hasina maha izy azy isika MALAGASY? Toy ny firenena matanjaka rehetra, mba manana ny sata sy ny mampiavaka antsika mandrakariva ankoatran'ny saina sy ny hiram-pirenena. Koa dia mirary taona ZINA sy fahatsarana betsaka lavitra kokoa noho ny taon-dasa rehetra ho antsika tsirairay avy ny tenako.
Koa dia hiverina amin'ny adavan'androm-piainana ary isika ry zareo, ny ahy ny vaovao dia ny volo nihalava sy nihanaevina andro aman'alina. Araka ny efa nolazaiko ihany dia ny menaka kinana sy ny diloilo no tena angady sy zezika naha toy izao azy io fa ireo rehetra izay efa nahalala ahy taloha dia mahatadidy tsara fa fohy volo lalan-dava teny aho ary manify volo koa.
Ankehitriny, zary lahasa be koa ilay mibango volo, ka nijerijery eraky ny tranok'ala teny ny tenako dia nahita laza tsara an'ity atao hoe "TANGLE TEEZER", inona tsara moa izy ity? Fihogo io e, fa nokarohana manokana mba hahamora ny fanogoana ny karazam-bolo rehetra: ny tsotra hatramin'ny ngita, ny fohy hatramin'ny lava. Ny fahitako azy moa dia fihogo plastika toy ilay ohatran'ny eny amin'ny sinoa eny behoririka ireny, fa ny lehilahy no toa mpampiasa azy ireny raha tsy diso aho. Ny nifinifin'ity fihogo ity dia misy fohy sy lava manao an-dalana roa mifanelanelana.
Efa maro ireo nanamboatra azy ity ny marika isan-karazany fa ito amin'ny sary ito no tena "orijinaly" vitan-dry zareo britanika. Tena andro maromaro izay no nampiasako azy ary tena marina ny voalazany fa tsy manapaka volo izy, ary mora hogoina ny volo aminy na maina na lena. Misy an'io sarony kely maintimainty io izy mba tsy hitoeran'ny vovoka rehefa avy ampiasaina, ary afaka entina any anaty poketra ihany koa raha tia mibango volo matetika isika vehivavy satria izy dia kely no sady maivana. Misy loko samihafa izy io eny amin'ny mpivarotra fa ny ahy manokana mavokely no nalaiko satria izay no nanintona ahy. Eto frantsa dia eny amin'ny magazay "Sephora" no ahitana azy ka 16€50 ny vidiny.
Fehiny momba io fihogo kely io: Tsara tsy anenenana ary mihena kokoa ny fotoana lany amin'ny fihogoana volo mihoatra ny fihogo tsotra efa nampiasaiko.
Fa efa miresaka fanatsotsorana fiainana ihany isika dia mba tiako zaraina aminareo ihany koa ito akora vaovao hitako ito, dia tsy inona fa "après-shampooing". Marika AUSSIE izy ity ary eto Frantsa dia ao amin'ny magazay MONOPRIX ihany aloha no mivarotra azy hatreto ka 6€50 eo ny vidiny.
Tsy hiresaka be dia be aho fa mba tiako hanandrana ianareo dia mba tantarao amiko eo ambany eo ny vokany taminareo, fa ny ahy manokana dia tena fahafahampo tanteraka no azoko.
Izay indray aloha ry namana sy tapaka rehetra fa manantena ny hiverina tsy ho ela eto indray.
Mankasitraka anareo rehetra mpamaky.
Publié par Ikala Fanja à 12:48 6 commentaires: